Nandray anjara tamin'ny WTTC Global Summit any Mexico ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Nandray anjara tamin'ny WTTC Global Summit any Mexico ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika
Minisitry ny fizahan-tany ao Jamaika dia manohana ny fananan-kery amin'ny vaksiny amin'ny Global Summit
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia nanatevin-daharana ireo mpanapa-kevitra momba ny fizahan-tany eran'izao tontolo izao any Mexico amin'ity faran'ny herinandro ity, ho an'ny Fihaonana an-tampon'ny Global Travel & Tourism Council (WTTC) Global Summit 2021.
Ny WTTC Global Summit dia karakarain'ny fiaraha-miasa amin'ny Governemanta Quintana Roo.
Ny lohahevitr'ilay hetsika dia "Mampiray an'izao tontolo izao ho fanarenana" ary manomboka amin'ny 25-27 aprily any Cancun.
Hon. Bartlett dia hanatevin-daharana ny Filoham-pirenena & Tale Jeneralin'ny US Travel Association, Governoran'i Yucatán, ary ny Minisitry ny Varotra An-tany & Fizahan-tany ho an'ny Peroa amin'ny adihevitra ifanaovana.
Raha any Mexico, ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika dia handray anjara amin'ny fivoriana maromaro miaraka amin'ireo mpitarika manerantany sy indostrialy toa ny minisitry ny fizahan-tany ho an'ny fanjakan'ny Saudi Arabia, Ahmed Al-Khateeb; Filoham-pirenena teo aloha tany Colombia ary nahazo ny loka Nobel fandriam-pahalemana 2016, Juan Manuel Santos; Chris Nassetta, Filoham-pirenena ary CEO an'ny Hilton sy ny talen'ny WTTC ary koa ny filoha sy ny CEO an'ny Carnival Corp. & Plc (Cruise), Arnold W. Donald.
Ity fihaonana an-tampony ity koa dia hahafahan'ny Minisitra Bartlett sy ireo solontenan'ny sehatry ny fizahan-tany iraisam-pirenena hamita ny fifanakalozan-kevitra nataon'ny WTTC, mikasika ny haavon'ny fanampiana omena an'i Saint Vincent sy Grenadines. Ity dia taorian'ny dinika farany natao nandritra ny fivorian'ny WTTC notarihin'ny minisitra Bartlett, nahitana an'i Hon. Ralph Gonsalves, praiminisitra Saint Vincent sy ny Grenadines.
Andriamatoa Bartlett koa dia hiady hevitra momba ny fizahan-tany marobe sy ny paikady izay hovitaina hampiharina, miaraka amin'ny solontenan'ny Repoblika Dominikanina, Panama, Mexico ary Costa Rica.